China Ugboro abụọ okpomọkụ ventilated agwaetiti friza DII-240 ụlọ ọrụ na-emepụta | Nenwell
Ugboro abụọ ikuku ventilated agwaetiti DII-240
A na-ahụkarị ndị na-ere ahịa agwaetiti na-azụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa dị mma. Ihe ngosi ndị a na-egosipụta bụ ihe ngwọta zuru oke maka igosipụta ọtụtụ mkpụrụ oyi kpụkọrọ akpụkọ ebe ha ka na-enye ndị ahịa gị ohere ịchọgharị ngwongwo niile na-enye.
Igwe mmiri dị na Island na-enye ndị azụmaahịa ohere iji ọgụgụ isi jiri ala niile dị na ala wee mepụta mpaghara ịzụ ahịa dị mfe. Na Nenwell, anyị na-echekwa ihe mkpuchi iko ma meghee nsụgharị nke kọfị friza agwaetiti, na-eme ka ị hụ na ị ga-ahụ ụlọ ngosi kachasị maka ụlọ ahịa gị.
Igwe ikuku ikuku a nke dị ala dị mma maka usoro ọgbara ọhụrụ, mgbanwe na gburugburu ebe obibi. Nlereanya ọ bụla gosipụtara teknụzụ ọhụụ na iko dị ọkụ, ọkụ na-enwu n'ime na ọcha dị n'ime iji hụ na ngosipụta kachasị mma.
Amaghi nke gosiputara agwaetiti nke ga-akacha mma maka azụmaahịa gị? Echegbula, ndị ndụmọdụ anyị nwere ahụmahụ dị njikere inye aka wee nwee ike ịgwa gị okwu site na nhọrọ niile dị. Naanị kọntaktị ma ọ bụ site na email ma ọ bụ site na ọrụ nkata ndụ anyị.
Nke gara aga: Ọrụ karịrị counter ụlọ ahịa friji CSS-2011SGA
• Ọnọdụ ọrụ nke 3M1,3L2 mpaghara okpomọkụ abụọ, ejiri maka ngosipụta na ire ahịa nke friji ihe oriri, anụ na ihe ndị ọzọ; maka egosiputa na ire azu azu oyi kpọnwụrụ akpọnwụ, anụ kpụkọrọ akpụkọ na nri oyi
• ojiji nke mba ika-aha SECOP Compressor, elu jụrụ arụmọrụ, plọg na play, mfe iji
• ala okpomọkụ sọrọ okpomọkụ sọrọ njikwa, ọrụ nwere ike ịgbanwe dị ka ina
• polyurethane uji eze foaming usoro iji belata oriri oyi ma belata oriri ike
• ultra-mkpa nnukwu mpaghara nnukwu arụmọrụ evaporator, jụrụ ngwa ngwa, olu dị irè
• echichi nke onwe evaporation mmiri erite, adaba iji, chekwaa nchegbu
• nwere ọnụ ụzọ
Total net ikike (L)
Ọnọdụ Njikwa Okpomọkụ
40 'HC Ibu Ibu
Multideck nkwụnye Na ụlọ ahịa Mkpụrụ Mkpụrụ Akwukwo nri S ...
100L Commercial Single Door Igbe Igbe friza na ...